XASAASI + DHAGEYSO: Sheekh Shaakir ‘‘Dadkii xorreeyay Galmudug uma baahna in laga xorreeyo‘‘! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XASAASI + DHAGEYSO: Sheekh Shaakir ‘‘Dadkii xorreeyay Galmudug uma baahna in laga...
XASAASI + DHAGEYSO: Sheekh Shaakir ‘‘Dadkii xorreeyay Galmudug uma baahna in laga xorreeyo‘‘!
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Madaxa Xukuumadda Maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa ka hadlay xaaladihii u dambeeyey ee Galmudug iyo mad madowga soo kala dhex-galay Dowladda iyo Ahlu sunna.
Wareysi uu siiyey laanta Af Soomaaliga ee BBC-da ayuu ku beeniyey in Ciidamada Dowladda ay Ahlu sunna kala wareegeen degmooyinka Matabaan, Guriceel iyo inta badan degmada Dhuusamareeb, hayeeshee uu sheegay in Ciidamada Shaqeynaya inay yihiin Ciidamada Dowladda iyo kuwa Ahlu sunna oo la isku daray.
Waxaa uu soo hadal qaaday Arrinta la xiriira 35 Xildhibana oo ay dowladda u balan qaaday,waxaana uu sheegay inay rajo ka qabaan in la siiyo,isla markaana sida lagu sheegaayo aysan aheyn xaalada Galmudug.
Sheekh Shaakir Cali Xasan ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay guddiga doorashada ay Magacawday dowladda iyo kan isaga uu soo Magacaabey,waxaana uu sheegay in xalinta arrintaasi lagu guda jiro,isla markaana aysan macquul aheyn in Dadkii shalay xoreeyay Galmudug in laga xoreeyo.
Halka hoose ka dhageyso Codka Sheekh Shaakir:
Shaakir Cali Xasan